Dalka Biljim oo safiirkii ugu horeeyey oo haween ah u magacaabay Sacuudi Careebiya | Somaliska
Dalka Biljim oo safiirkii ugu horeeyey oo haween ah u magacaabay Sacuudi Careebiya
Dalka Biljim ayaa danjiraha u fadhin doona boqortooyadda Sacuudiga waxuu u magacaabay haweeneyda lugu magacaabo Dominique Mineur. Haweeneydan oo haatan ah danjiraha dalkaasi ee fadhisa Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa bartamaha sanadka inugu soo fool leh waxaa ay xarrunteeda noqon doonta magaallo madaxda Riyaad.
Haweeyneeydan ayaa noqoneysa danjirihii ugu horeyeey ee dumar ah ee dalkaasi loo magacaabo. Sanadkii markuu ahaa 2010-kii ayaa dalka Joorjiya waxaa uu danjire u magacaabay dalka Kuwait, waxaa sidoo kale ay ahaan laheyd danjiraha fadhiya xarrunta Riyaad, hase ahaa xafladii furitaanka safaaradda ayaa waxaa goobta soo xaadiray danjire nin ah. Sacuudi Careebiya waxaa ay ka mid tahay dalalka aad dunida galbeedku ugu dhaliilo ama ku tilmaamo in uu ku tuntay xuquuqda aadanaha iyo haweenka.
Ugu dambeyntiina dalka Biljim waxaa uu danjire haweeney ah u magacaabaya dalka Iiraan oo qudhiisa ah dal ay ka jiraan sharciyo adag oo ay diblomaasiyiinta reer Galbeedku ee ku sugan ku adag tahay ineey ku shaqeeyaan. Sanadkan horaantiisii ayaa diblomaasiyiin reer Iswiidhan ah waxaa soo gaartay dhaleceyn la xirriirta in dalkaasi ay tageen iyagoo aan madaxa u dadneyn taas ah tixgelin diimeed.
La dagaalanka kooxaha xag-jirka ah oo baraha bulshadda lagala dagaalamayo